Ụlọ Ọgwụ Ụlọ Ọgwụ Na-agba Ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ Ahụike Na-akpaaka,Ọnụ Ụzọ Ákwà Ntugharị,Ụlọ Ọgwụ Nlekọta Ụlọ Ọgwụ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Ịgba Ọkụ n&#39;Ụlọ > Ụlọ Ọgwụ Ụlọ Ọgwụ Na-agba Ọkụ
Ihe Nlereanya.: HF-W5498
Ọnụ ụzọ ọhụụ nke ụlọ ọgwụ, ọnụ ụzọ ọ bụla nwere otu efere ígwè nchara, jikọtara ya na etiti akụkụ nke okpokoro nke okpukpu ala na ike elu nke anụ ọhịa, gburugburu akwa igwe anaghị agbacha agbacha, mechie ezi omume nke ọma, mechie elu mee nke elu mma EPDM pụrụ iche bụrụ ihe akara zuru oke. Ngwongwo ígwè nchara eji arụ ọrụ na-acha agba oyi na-acha ọcha, nke dị elu na-acha ọcha na-acha ọcha polyester electrostatic ntụ ntụ mkpuchi, ya arụmọrụ dị ka GB5237.4-2000 ọkọlọtọ (kwekọrọ na ụkpụrụ Europe QUALICOA D) , na mmepe nke oke osisi. Door Press (nlekọta ahụike na-egbochi ọgwụ mgbochi ọrịa X-ray) na-ekpuchi ọkpụrụkpụ kwekọrọ n'ụdị stereotype, mkpuchi nchebe na-ekpo ọkụ 2mmpb okpurukpu, ọkpụrụkpụ nke ọzọ 2mmbp nchedo. Ihe dị iche iche na-eme ka a na-ahụ anya dị iche iche, dị iche iche na mgbidi ahụ, na-agbanwe agbanwe nke mmetụta iji zere ọnụ ụzọ, na-eme ka nchebe dị nchebe, ị na-emeghe nke ọma.
1. Oghere ọnụ ụzọ jupụtara na ụfụfụ polyurethane na nkà na ụzụ n'ogologo nnukwu nrụgide, elu-ike aluminom alloy etiti, na-ebuli elu nnukwu ikpo okwu hydraulic ngwa ịpị. Ihe dị mma na ngwaọrụ na teknụzụ iji hụ na enwere ike ịmepụta akwụkwọ ọnụ ụzọ: ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche, nchara ígwè, aluminom, osisi electrolytic, oghere PVC, oghere ụzọ nwere ike ịhọrọ ọtụtụ agba agba.
akara akara, dịka akara nke ụlọ ọgwụ na-eji ahụ ike 2. Umu ụzọ mepụtara akụkụ abụọ, ihe dị elu na nke etiti
3. Oghere ụzọ na ọnụ ụzọ nwere ike ijikọta ya na stereotype maka nchedo radieshon.
4. Ogige igwe anaghị agba nchara 304, ọnụ ụzọ etiti e tinyere na akwa dị mma dị ka ihe mgbakwunye pụrụ iche, mejupụta ọnụ ụzọ dị n'ime ya ọnụ pụrụ iche maka ntutu isi nke polyurethane. Ọnụ nke otu, ọnụ ụzọ abụọ, ọnụ ụzọ abụọ, nnukwu ahaziri
5. Ngwa: ụlọ ọgwụ pom, laboratory.
Mgbanwe Igwe ọkụ Nchedo:
Nke a bụ nke kwekọrọ n'ụkpụrụ ndị Europe, yana nnwere onwe zuru oke. Nakwa kwekọrọ na ụkpụrụ ESC na n'usoro ya na gọọmentị France banyere iwu ọrụ ka achọrọ ọnụ ụzọ.
Nkwekọrịta na iwu Germany banyere ọnụ ụzọ dị n'èzí nke ike na-amalite
Kedu ọrụ ị ga-enweta n'aka anyị?
1) Ọrụ OEM maka gị na ndị ahịa gị.
2) Kwadoro mbupuga gị maka ebe niile.
3) Akara CE / ISO-9001 / SGS
4) Ntinye vidiyo ma ọ bụ ntụziaka maka gị.
5) Atụmatụ dị mma maka ọnụ ụzọ ziri ezi.
6) Ọrụ ọrụ na-akwado asụsụ, email ma ọ bụ oku ekwentị.
7) Nduzi na ntụziaka na-arụ ọrụ mgbe echichi.
8) Ọrụ / Service na-enweghị atụ mgbe ọ bụla.
9) 12 Ọnwa ọhụụ maka ọnụ ụzọ na ngwa niile.
Igwe Igwe Ngwongwo Na-enweghị Ngwá Agha Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Ahụike Na-akpaaka Ọnụ Ụzọ Ákwà Ntugharị Ụlọ Ọgwụ Nlekọta Ụlọ Ọgwụ Ụlọ mgbochi akpaaka Ụlọ Nche Nchebe Na-akpaghị aka Ụlọ Ọrụ Ọrụ Na-akpaghị aka Ụlọ Ụlọ Ọgwụ akpaaka Ụlọ Ọrụ Nchekwa Onwe Onye Na-akpaghị aka